Dad u dhashay Faransiiska oo lagu laayey waddanka Niger | Gaaroodi News
Dad u dhashay Faransiiska oo lagu laayey waddanka Niger
Waxaa la arkay gaadhigii ay saarnaayeen oo gubtay
Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday koox ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dalka Niger, halkaas oo ay ku dileen lix muwaadin oo Faransiis ah, hagahooda maxalliga ahaa iyo darawalkoodii, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dawladdu.
Raggan hubaysan ayaa waxay wateen mootooyin waxayna ku fureen rasaas, gudoomiyaha gobolka Tillabéri, Tidjani Ibrahim, ayaa sidaasi u sheegay wakaalada wararka ee Faransiiska ee AFP.
Waxay joogeen gobolka Koure, oo caan ku ah dalxiisayaasha doonaya inay arkaan geriga duurjoogta ah, noociisii ugu dambeeyey Galbeedka Afrika.
Madaxtooyada Faransiiska ayaa iyana dhankeeda xaqiijisay dhimashada muwaadiniintan Faransiiska ah.
Nimankan Faransiiska ah ayaa u shaqeynayay koox gargaar oo caalami ah, wasiirka difaaca ee Niger Issoufou Katambé ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters. Horaantii, masuuliyiintu waxay ku sifeeyeen keliya inay ahaayeen dalxiisayaal.
Hay’adda samafalka ee Faransiiska ee ACTED oo ay ka tirsanaayeen ayaa iyana dhankeeda sheegtay in qaar shaqaalaheeda ka mid ah ay qayb ka ahaayeen masiibadan.
Madaxweyne Emmanuel Macron, ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Niger Mahamadou Issoufou, sida lagu baahiyey warsaxaafadeed aan la faahfaahin waxyaalihii ay ka wada hadleen.
Sawirro ay aragtay BBC ayaa muujiniyey maydka nimankan oo ag daadsan gaadhi nooca loo yaqaan 4×4. iyadoo khataruhu sarreeyaan, haddana dalxiisayaashu waa kuwa taga Galbeedka Afrika.
Gaadhiga ayaa muuqday mid gubtay.
Weerarkan ayaa dhacay ku dhawaad abbaarro 11:30 xilliga dalkaasi, kaas oo ka dhacay bariga Koure, oo ku dhawaad saacad safar gaadhi looga socdo caasimadda Niamey, sida ay tebisay wakaaladda wararka ee AFP.
Illaa weli ma cadda cidda ka danbaysa weerarkan, laakiin kooxo jihaadiyiin ah ayaa si weyn uga hawlka dalkan Niger.
Dawladda Faransiiska ayaa muwaadidiinteeda kula talisay in aanay u socdaalin Niger, halkaas oo horena u ahaan jirtey dal uu gumeystay Faransiis.
Waxaanay dawladda Faransiiska sheegtay in mushkiladda argagaxisadu ay aad u sarrayso meelo ka baxsan caasimadda dalkaasi ee Niamey
Kooxo mintidiin ah, oo ay kujiraan Boko Haram, ayaa ka hawlgala aaggaasi oo rabshadana ka geysta, kuwaas oo ah kooxo xiriir la leh al-Qaacida iyo ururka isugu yeedha Dawladda Islaamiga ah oo muddooyinkii u danbeeyey ku soo badanayay gobolka Sahel.
Faransiiska ayaa hogaaminayey isbahaysi ah xulafada Galbeedka Afrika iyo Yurub oo ka dhan ah xagjiriinta Islaamiyiinta ah ee gobolka ku sugan tan iyo bishii Juun.
Si kastaba ha noqotee, dalxiisayaashu wali waxay booqdaan Geriga ku dhaqan Niger.
Gerigaas xayn xaynta u socda ayaa halkan degaan u noqday ku dhawaad labaatan sano ka hor, iyada oo laga ilaaliyo ugaadhsatada.
Deegaanka Koure Giraffe, oo qiyaastii 65 km (40 mayl) koonfur bari ka xiga caasimadda Niamey, waxa u soo dalxiis taga dad aad u fara badan.